Home » Lahatsoratra ho an'ny vahiny » Manidy varavarana amin'ny fanafarana nikôtinina ve ny governemanta Aostraliana?
Iray volana lasa izay, ny minisitry ny fahasalamana aostraliana Greg Hunt dia nanaitra ny vondron'olona niova fireneny tamin'ny fireneny rehefa nanambara izy fa ny fanafarana manokana an'ny e-ranom miaraka amin'ny nikôtinina voarara any Aostralia hatramin'ny 1 Jolay. Noho ny fomba hafahafa izay itondran'ny lalàna mifehy ny zava-mahadomelina any nikôtinina, vapera Aostraliana an'arivony maro no miankina amin'ny mpivarotra any ivelany any New Zealand, Etazonia, Fanjakana Mitambatra ary firenena hafa hanome ny ranom-boalobony. Ny fandrarana dia hanapaka ny làlan'ny famatsian-tseranana ary hanery ny vapera any Aostralia hivoaka amin'ny vape tsy misy nikôtinina na hahazo ny ranon-tsolika any amin'ny farmasia.
Soa ihany ho an'ireo vapera izay tsy te-hividy e-ranon'isa amin'ireo mpitsabo, ny fandraràna fanafarana e-ranoka aostralianina dia tsy nisy fiantraikany tamin'ny volana jolay araka ny nomanina voalohany. Nanambara ny fandrarana ny minisitra Hunt nefa tsy nanome fotoana ny parlemantera aostraliana hiady hevitra momba azy io, ary maro ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta no tsy faly satria tsy navela hiteny ny hevitr'izy ireo.
Na izany aza, ny taratasy feno fahatezerana avy amin'ny mpikambana 28 ao amin'ny Parlemanta dia ampy fotsiny mba hahatonga ny minisitra Hunt hanemotra ny fandrarana - tsy handinika azy io intsony. Tamin'ny fotoana nanoratana, ny fandraràn'ny aostralianina ny fanafarana nikôtinina manokana dia kasaina hitranga amin'ny 1 Janoary 2021.
Manana ny anjarany amin'ny mpanohana sy mpanohitra ny fandrarana, ary ity lahatsoratra ity dia hiezaka hamintina ny hevitry ny andaniny sy ny ankilany.
Ahoana ny fomba ividianan'ny aostraliana E-Liquid amin'izao fotoana izao?
Ny lalàna aostralianina dia manasokajy ny nikôtinina ho toy ny entona voafehy ary, raha tsy amin'ny endrika vokatra paraky nentim-paharazana na vokatra fanoloana nikôtinina dia tsy azo vidiana raha tsy misy fanafody. Fitaovana «vaping» ary «e-ranon-javatra tsy misy nikôtin» dia azo alaina avy amin'ireo mpivarotra Aostralianina. Mba hividianana e-ranon-drongony miaraka amin'ny nikôtinina, na izany aza, ny Australiana iray dia tsy maintsy mahita dokotera vonona hanome azy mialoha.
Raha vantany vao mahazo fanafody ny olona iray dia manana safidy roa izy hividianana e-ranon-javatra amin'ny nikôtinina. Ny safidy tokana hividianana azy ao an-trano dia ny fividianana azy amin'ny fivarotam-panafody mitambatra. Ny ankamaroan'ny aostraliana dia tsy mandeha amin'io làlana io satria ny e-ranon-javatra noforonin'ny fivarotam-panafody matetika tsy dia be mpitia ary tsy dia mahafinaritra loatra raha ampiasaina. Ny safidy faharoa dia ny mividy e-ranoka amin'ny fanafarana azy. Ny lalàna aostralianina amin'izao fotoana izao dia mamela ny olona hanafatra nikôtinina ranon-javatra voafetra ho fampiasana azy manokana miaraka amin'ny preseta. Ny fanavotana ny fitsaboana amin'ny nikôtinina dia mamela ny aostralianina hanafatra ranom-boaloboka amin'ireo mpivarotra tiany. Ny fandrarana napetraky ny minisitry ny Hunt dia hamarana izany fomba izany.
Fa maninona ny aostralianina sasany no mankasitraka ny fandraràn'ny nikôtinina?
Ny aostralianina sasany dia te hahita ny fanafarana tsy miankina amin'ny e-ranon-javatra satria tsy hentitra ny fampiharana. Tsy azo atao tsotra izao ny mangataka amin'ny mpiasan'ny fadin-tseranana mba hanamarina ny fanafody nikôtinina mety isaky ny miditra ao amin'ilay firenena ny fonosana misy e-ranon-javatra. Fantatry ny aostralianina fa mety tsy ho tratra izy ireo raha mividy e-ranon-javatra nefa tsy mahazo prescript, ka olona maro no tsy manelingelina an'io fombafomba io. Raha ny voalaza, ny ankamaroan'ny olona mividy e-ranoka an-tserasera any Aostralia dia tsy manana preskripsi.
Rehefa dinihina izany toe-javatra izany dia matahotra ny aostralianina sasany fa sao ny fireneny indray andro any hanana olana mitovy amin'ny tanora amin'izao fotoana izao atrehin'i Etazonia. Tsy voafehy tsara ny fivarotana e-ranona any Etazonia, ary tanora an-tapitrisany maro izao no miova. Ny ankamaroan'ny zatovo izay maka vape dia mahazo ny e-ranony amin'ny alàlan'ny loharano tsy ara-potoana toy ny media sosialy. Ny aostraliana izay manohana ny fandrarana ny fanafarana dia mahatsapa fa, raha tsy misy afa-tsy amin'ny alàlan'ny dokotera sy fivarotam-panafody nahazo alalana ny e-ranon-javatra misy nikôtinina, dia tokony tsy ho vitan'ny tanora mihitsy ny mividy azy. Noho izany, Aostralia dia tsy tokony hanana olana momba ny tanora toy ny zava-nitranga tany Etazonia.
Fa maninona ny aostralianina sasany no manohitra ny fandrarana ny fanafarana nikôtinina?
Ny olana amin'ny fandraràna ny fanafarana nikôtinina amin'izao dingana izao dia ny efa misy farafaharatsiny 227,000 olona iza ny vape any Aostralia - ary io tarehimarika io dia manomboka amin'ny 2016. Ny isan'ny vapera olon-dehibe any Aostralia ankehitriny dia toa lehibe kokoa. Na dia misy aza ny e-ranon-tsolika tsy misy nikôtin any Aostralia tsy misy fetrany, ny zava-misy dia ny ankamaroan'ny olona manao vape dia mampiasa nikôtinina satria nahatonga azy ireo hiala sigara. Ny fanerena ireo olona ireo hamaky ny rafitra ara-pahasalamana hividy e-ranon-javatra dia tsy isalasalana fa hahatonga mpifoka sigara an'arivony maro hiverina amin'ny sigara. Izany dia ho fatiantoka lehibe amin'ny fahasalaman'ny olom-pirenena Aostralianina.
Ny antony faharoa mahatonga ny Aostralianina maro hanohitra ny fandrarana ny fanafarana e-ranoka dia satria, raha jerena ny tantara, ny politikan'ny governemanta voarara dia mahalana no miasa araka ny noeritreretina. Rehefa mandràra ny zavatra tadiavin'ny olona ny governemanta dia mitady fomba hahazoana izany fanafody izany ny olona. Ny olona sasany dia tsy hiraharaha ilay fandrarana ary hanohy manafatra e-ranon-javatra miaraka amin'ny fanantenana fa tsy ho tratra izy ireo. Ny fiezahana mitohy hamoaka ranom-boaloboka dia hanome enta-mavesatra be an'ireo maso ivoho mpampihatra lalàna ao Aostralia.
Ny olon-kafa dia hanandrana hanao e-ranon'izy ireo manokana na hividy e-ranon-javatra vita an-trano amin'ny loharano tsy miankina. Ny tsena mainty e-ranon-tany izay hamorona ny fandrarana ny fanafarana dia hampiroborobo bebe kokoa ny fampiharana ny lalàna ary mety hiteraka fanapoizinana nikôtinina sy ireo vokatra hafa tsy ilaina.
Raha fintinina, ireo mpanohitra ny fandrarana ny fanafarana import dia mino fa raha ny mpifoka any Aostralia te hampiasa ny vaping ho toy ny fomba fialana dia tokony hataon'ny governemanta ho mora kokoa - tsy ho sarotra kokoa - ny hanaovan'izy ireo izany.
Ahoana no fomba hividianan'ireo aostralianina ny E-Liquid aorian'ny fiatombohan'ny fandrarana?
Raha manan-kery amin'ny 1 Janoary araka ny nomanina azy ny fandrarana dia mbola ho azon'ny mpivarotra antsinjarany any Aostralia mivoaka maimaim-poana ny nikôtinina. Na izany aza, ny fandrarana dia hahatonga ny fanafarana e-ranon-tany tsy miankina miaraka amin'ny nikôtinina ho tsy ara-dalàna. Ny Australiana izay tratra manandrana manafatra e-ranon-dry zareo dia hiatrika onitra an-jatony tapitrisa dolara.
Eo ambanin'ny fe-potoana fandrarana, ny Aostraliana rehetra te-hividy e-ranon-drongony amin'ny nikôtinina dia mila mangataka fanafody amin'ny dokoterany aloha. Ireo dokotera sy fivarotam-panafody te-hanafatra e-ranon-javatra dia mila mandalo fizotry ny fankatoavana ary mahazo fahazoan-dàlana hanafarana. Avy eo izy ireo dia afaka manafatra ranom-boaloboka avy any ivelany ary mivarotra izany amin'ireo marary manana prescription.
Aostraliana izay tsy te-hividy e-ranoka amin'ireo mpitsabo azy dia manana volana vitsivitsy sisa tavela mba hametrahana ranom-boaloboka alohan'ny hanombohan'ny fandrarana.